KALA DUWANAANSHAHA BANGIYADA ISLAAMKA IYO KUWA KUSHAQEEYA NIDAAMKA RIBADA By Mahammed Abdi Husein |
KALA DUWANAANSHAHA BANGIYADA ISLAAMKA IYO KUWA KUSHAQEEYA NIDAAMKA RIBADA By Mahammed Abdi Husein
Maqaal (NN) 02/10/2015
waxaan maqaalkan ku falanqayndoonaa maxay Bangiyada islaamku
kaga duwanyihiin bangiyada kushaqeeya nidaamka ribada?, maxay
tahay faa’iidadada Bangiyada islaamku? Sideey ushaqeeyaan
Bangiyada Islaamku?, noocyada Xisaabaadka ee Bangiyada Islaamka.
Bangiyadu waxay qabtaan hawlo aad umuhiim ah waxay udhaxeeyaan laba macaamiil waa mida koobaade macaamiisha haysta lacagtii ee u baahan meelay kuxafidaan (Savers) iyo dadka ubaahan lacagihii (Spenders). Dadka haysta kaydka waxay noqon karaan sharikaad, shakhsiyaad iyo dawlado, sidoo kale Dadka ubaahan lacagaha waxay noqon karaan sharikaad, shakhsiyaad iyo dawlado. Hadaba aan usoo daadago halkuu hada fkaygu yahaye bangiyada kushaqeeya nidaamka ribadu waxay isticmaalaan Ribo marka ay kaysadaha ka qabanayaan lacagaha oo waxay dusaaraan ribo inta ay bangigaga taalo lacagtiisu sidoo kale waxay dulsaaraan ribo marka uu qofka lacagta ubaahanyahay (daynta uga baahan) ribo. Hadaba Bangiyada islaamku waa ka xalanyihiin mana isticmaalaan ribo labada dhinacba.
Waxaa laga yaabaa inaad iswadiiso maxay hadaba isticmaalaan?, maxayse kafaa’iidaan?. Bangiyada Islaamku waxay isticmaalaan nidaam aan kahor imaanayn shareecada Islaamka. Bangiyada Islaamku waxay isu keenaan dadka haysta dheeriga (Savers) iyo dadka ubaahan maalgalimaha (Borrowers).
MAXAY TAHAY FAA’IIDADA BANGIYADA ISLAAMKU
Faa’iidada bangiyada islaamku ma ahan mid qormo lagu soo koobi karo laakiin waxaan isku dayi inaan dhawr qodob oo ugu muhiimsan yaradul istaagno.
Ka warqabka Maalgalimaha: Bangiyada kushaqeeya nidaamka ribadu muhiimad saas ah masiiyaan waxyaabaha lamaalgaliyo, sida loo maalgaliyo iyo meesha lagu maalgaliyo toona laakiin bangiyada islaamku waxay siiyaan ahmiyad aad ubalaaran maadaama ay qayb ka yihiin maalgalinta, waxay ahmiyadaasi u sahashaa bangiyada islaamka inay ka badbaadaan dhaqaale burbur sifudud usoo wajaha.
Waxay dhimaan Kharashaadka lala xidhiidhiyo hawlaha (transaction cost): kharashaadka ladhimayo macnaha laga leeyahay waxaa weeye faa’iidada ama waxqabadka bangiga oo sare ukacda.
Hormarka Bulshada: Himilooyinka Bangiyada islaamku waa sidii loogaadhi lahaa hormar iyo cadaalad mujtamaca islaamku gaaraan.
NIDAAMKA XISAABAADKA EE BANGIYADA ISLAAMKA
Waxaa jira nidaam bangiyadu ushaqeeyaan haday yihiin kuwa nidaamka ribada kushaqeeya iyo kuwa waafaqsan shareecada islaamka hadaba bangiyada islaamku xisaabaadkoodu wuxuu ka koobanyahay laba dhinac (1) lacagaha ay ka qabtaan dadka (deposit) (2) maalgalinta lacagahaas (Asset investment).Waxaa xasuusin mudan in badngiyada islaamku sanadihii ina soo dhaafay sameeyeen hormar aad ubaaxadwayn ayna kor uqaadeen hawlaha ay macaamiishooda uqabtaan, hadana waxaa wali ugu xoog badan oo ay qabtaan: Xisaabaad furan, kaydsi (Saving account) iyo kaydsi maalgalin (investment account)
Xisaabaadka furan (Current account): xisaabaadka noocaan ah waxaa loo isticmaalaa daboolista kharashaadka joogtada ah ayadaoo ay tahay sababta ugu way nee macaamiishu lacagahooda udhigtaan inay u helaan amaan ( Safety) hadaba bangiyadu macaamiisha noocaan ah waxay uqabtaan adeegyo aad u muhiim ah oo ay kamidyihiin: in ay lacag ku shubtaan account gooda, in lasiiyo kaar ama book meeshii ladoono lacagtooda ugujirta Account gooda ay kala bixikaraan (Visa card/Book Bank), in loo sameeyo nidaam bile ah oo lagu wargalinayo dhaqdhaqaaqa xisaabtiisa, waxaa kaloo loo sahlaa inay adeegyadooda ka fushan karaan sida taleefanadooda (Mobile Banking) ama internet ka (Internet banking).
Waxaan hadaba yaraha ifin siday bangiyada islaamku umaamulaan xisaabaadka furan Bangiyada islaamku waxay xisaabta furan kasoo qaadaan inay tahay amaano loodhiibtay bangiga ama hadaan sikale udhaho dayn aan dulsaarlahayn (QaradXasan). Bangiyadu lacagahaas siday doonaanayay u isticmaalaan haday noqoto maalgalin ama daynminkaraan cidkale wixii faa’iidoa makhasaara ah eeka dhashana waxaa dhabarka udhigta bangig, qofkuna wuxuu marwalba xaq uleeyahay inuu helo lacagtii uu bangigadhigtay markuu ubaahdo.
XisaabtaXiran (Saving Account): Nidaamka noocaan ah waa nidaam usahlaya macaamiisha inay lacagahoodi wixii deeri ka ah nolol maalmeedkooda ku kaydsadanaan bangiyada waxaa layiraahdaa macaamiishu ayaga oo ka cabsiqaba arimo dhawr ah oo ay kamid tahay: Dhinaca amniga oo ah in lacagtiiba laga xado, in qiima dhac kuyimaado nidaamka iibsiga suuqa iyo inay khatar kalaba kutimaado. Xisaabta xiran waxaa loo qaybiyaa dhawr qaybood oo ay kamidyihiin: (1). Xisaab xiran laakiin markii loobaahdo waxlagala bixikaro (on Demand Saving Account), (2). Xisaab xiran oo toos ah (Direct Saving account) (3). Xisaab xiran wakhti cayiman (Fixed term accounting) haba kala duwanaadaan noocyada xisaabta xiran laakin macaamiishu noockastaaba waxay xaq uleeyihiin inay labaxaan lacagahooda markii ay ubaahdaan.
Waadiya: Nidaamkaan waa nidaam uu bangigu damaanad qaadayo lacagta ay macaamiishu dhigtaan markii ay rabaan inay labaxaana ay helayaan sida kuwa aan kor kusoo xusay, Nidaamkaan wuxuu kaga duwanyahaykuwa kore Bangigu siduu doono ayuu u isticmaali lacagtii lagu kaydsaday haday noqoto inuu maalgalin kusameeysto ama uu cid maalgashi samaynaysa kudarsado Macaamiishu waxay helayaan adeeg bilaasha ah oo lamida kuu xisaabta furan. Bangiyada qaar waxay sameeyaan hadiyado noocya kala duwan ah ama hadiyad lacag ah amaba caymis. Aan sikale uyara dhigo soona kobo: Waadiya: wxay kabilaaban in qofku lacagta bangiga ku kaydsado, Bangiguna uu maalgalin kusameeyo, wixii faa’iido ah ee kadhsha bangigu qofka waxbuu kasiini wixii khasaara ah ee kadhashana bangiga ayaa dhabarka udhigan.
Mudaaraba: Nidaamkaan waa nidaam ku salaysan Caqdi dhaxmara Bangiga (Mudarib) iyo Qofka lacagta leh (Rabbul-Maal) Caqdigaasi wuxuu bangiga u ogolaan in bangigu maalgaliyo lacagtii, waxaa sidoo kale nidaamkaan loo isticmaalaa noocyada xisaabaadka sida: Xisaabta xiran, Xisaabta furan iyo xisaabaadka maalgalima. Nooca xisaabda furan ee Mudaarabada waxaa la xisaabiyaa celceliska koontada (Xisaabta) kujirta bishii, inkastoo qofku lacagtaas labixikaro hadana bangiyada qaarkood waxay shirdiyaan in marwalba lacag tirsigeedu bangigu cayimay kujirto koontada qofka (xisaabta). Faa’iidada waxaa loo xisaabiya dhawr nooc: Bilbil, Sadex-sadex bilood amaba waxa aloo xisaabiya inta lacagtu kujirtay koontada, Bangiyada qaarkood waxay faa’iidada ku saleeyaan cadada lacagta ah ee kujirta account ga qofka Tusaale ahaan hadii lacagtu dhantahay $50,000 waxaa loo qaybsanayaa 60:40 haday kayartahayna 50:50.
Qarad-Xasan: Bangiyada nidaamkaan isticmaala waxay lacagta kaydka ah kazoo qaadaan dayn bilaa riba ah oo bangiga lasiiyay, Maadaama daynta noocaan ah uuna qofku xaq ulahayn qayb faa’iidada kasoobaxda hadana bangiyadu waxay isticmaalaan nidaam ah inay qofkii hadaiyad ama adeeg bilaash ah siiyaan. Hadaba qayba badan oo kamida fuqahada waxay sicad uga soo horjeedaan hadiyadaha ama adeega bilaasha ka ah ee qofkaan lasiinayo waloow qaar ayba kalamid dhigaan ribada.
Xisaab Maalgalin (Investment Account): waxaa lookala qaadaa dhawr nooc xisaabta noocaan ah: Maalgalin Guud ( General Investment Deposit), Maalgalin gaar ah (Special Investment Deposit) iyo Maalgalin leh wakhti Cayiman ama aan Cayinayn (limited or unlimited period of investment deposit). Sidookale waxay noqonkaraan Maalgalin Bangiga loo xilsaaray iyo Maalgalin qofka loo xilsaaray. Hadaba meesha nooca hore bangigu ka mas’uulka yahay inuu soo xulo nooca mashaariicda ee lacagtaas lagu maalgalinayo, nooca danbe qofka ayaa xusha nooca mashaariicda lagu maalgalinayo lacagtiisa. Hadii lacagta lamaalgalinayo leedahay wakhti cayiman qofku mudadaas lama bixi karo lacagta, hadiise ayna wakhti cayiman lahayn markii uu labaxayo ayaa loo xisaabiyaa faa;iidada ama khasaaraha kasoobaxay Faa;iidada sidii ladoono ayaa lagu heshiin karaa laakiin khasaaraha waxaa loo qaybsadaa saamigal udhigma lacagtii uu qofku maalgashaday. Hadaba si loo ilaaliyo maalka hantiilayaasha ayaa waxaa lasameeyaa in ladamaanad qaado maalgalinta oo dhan ayada oo lagu salaynayno 3 hab: In Bangiga dhexe ee wadanka bangigaasi kadiiwaan gashanyahay damaanad qaado, in bangiga laftiisu damaanad qaado iyo in Camis lagaliyo lacagta oo cid sadaxaad damaanad qaado waa caymiskee, Waxaa kaloo lasoo jeediyaa in lacagta lagu maalgaliyo hanta maguuraan ah kadib hantidaas maguuraanka ah ladamaanad qaado.
Waxaan Maqaalka xiga kusoo qaadandoonaa Adeegyada kala ee bangigayda Islaamku uqabtaan Macaamiishooda.
Mahammed Abdi Husein